E wezụga ihuenyo: Otu Blockchain Ga-esi Ahịa Ọrịa luzụ ahịa | Martech Zone
Mgbe Tim Berners-Lee mepụtara Web Wide Web n'ime afọ iri atọ gara aga, ọ nweghị ike ibu ụzọ hụ na wouldntanetị ga-aghọ ihe ọ bụla dị na ya taa, na-agbanwe agbanwe n'ụzọ ụwa si arụ ọrụ n'akụkụ niile nke ndụ. Tupu Intanet, ụmụaka chọrọ ịbụ ndị na-agụ kpakpando ma ọ bụ ndị dọkịta, na aha ọrụ nke influencer or ihe okike nanị adịghị adị. Ngwa ngwa rue taa na ihe dika 30 percent nke ụmụaka gbara afọ asatọ ruo iri na abụọ nwere olile anya ịghọ onye TTuber. Apartwa iche iche, ọ bụghị ya?
O doro anya na mgbasa ozi ọha na eze na-eme ka ndị ahịa ahịa ahịa ahịa na-ebuli elu US $ 15 ijeri site na 2022 na mmekorita ọdịnaya a. Ahịa naanị okpukpu abụọ bara uru kemgbe 2019, na-egosipụta ikike nke ụlọ ọrụ ahịa ijeri dollar-ijeri. Ma ọ na-akwado nnukwu ihe dị oke ọnụ ma ọ bụ ngwa ọhụụ, ndị na-eme ihe ike abụrụla ọtụtụ ụdị na-achọ iru, itinye aka na ịrịọ ndị na-ege ha ntị.
Ingkụzi Egwuregwu Ego, Inwe Ahịa Gị
Ewu ewu na nke influencer ahịa abụghị na-enweghị ihe kpatara ya. Naanị na 2020 naanị, anyị hụrụ kpakpando YouTube kachasị akwụ ụgwọ na-enweta ihe ruru US $ 29.5 nde, yana ndị isi ọdịnaya iri kachasị na-adọta ụgwọ ọrụ karịa US $ 10 nde. Dịka ọmụmaatụ, Kim Kardashian rere ere ya na nkeji nkeji mgbe ndị na-ekiri ihe dị ka nde 12 na-ege ntị na ndụ ya, ebe ndị na-eme ihe omume TikTok ebidola ngwaahịa na ụdị ndị na-ese akara ngosi ama ama. Nke ahụ bụ akụkọ maka ndị na - ede aha A ma ọ bụ ndị jisiri ike wụba ebe ahụ, na - achọta ma ndị ama ama ha ama ama.
Agbanyeghị, enwere akụkụ ọzọ na akụkọ banyere influencer a na-elegharakarị anya n'etiti mkparịta ụka na ụda nke ihe kachasị ọhụrụ na kachasị sie ike. Maka otu, ike ikpo okwu na-enwekarị ike imebi ihe ọhụụ ma ọ bụ ndị egwuregwu niche. Nnukwu ihe mgbochi YouTube maka itinye ego na-abata n'uche - ịnweta ego mgbasa ozi naanị maka ndị okike ndị megoro ndị na-ege ntị karịa 1,000 ebe onye okike na-enweta naanị $ 3 ka $ 5 kwa 1,000 video echiche. Obere obere ego maka ụlọ ọrụ dị otú ahụ na-akwụ ụgwọ. E nwekwara ndị nọ nrigbu site n'ụdị - ma ọ bụ ohi oyiyi, ede iwu unsound contracts, na-akwụghị ụgwọ, ma ọ bụ ịmanye influencers na-arụ ọrụ n'efu. Site na okike ọdịnaya ruo na ogbugbu ọdịnaya, ndị na-eme ihe ike na-ebu ibu maka mkpọsa ahụ niile, a ga-akwụkwa ha ụgwọ maka ọrụ ha.
N’ịchọ imepụta ọnọdụ akụ na ụba na-adighi mma, keduzi otu ndị na-emepụta ọdịnaya ga-esi jiri aka ha wulite akara ha ma hụ na ha mezuru nkwa ha?
Blockchain nwere ike ịbụ otu ụzọ iji mee nke a.
Otu ngwa dị otú a nke ngọngọ bụ akara ngosi - usoro nke ịnye akara akara ngọngọ nke nwere ike ịpụta dijitalụ inwe ma ọ bụ sonye na akụ azụmaahịa n'ezie. A tụlere Tokenisation n'ọtụtụ ọnwa na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, na-esote usoro ojiji n'ofe ọtụtụ ọrụ gbasara egwuregwu, nka, ego, na ntụrụndụ. N'ezie, ọ bụ n'oge na-adịbeghị anya ka ọ pụtara na ntanetị mmekọrịta yana mwepụta nke BitClout, ikpo okwu nke nwere ike igbochi ngọngọ na-enye ndị mmadụ ohere ịzụta na ire akara ngosi na-anọchite anya njirimara ha.
N'otu aka ahụ, ndị na-emepụta ọdịnaya nwere ike ịnweta ikike, nnwere onwe, na ikike nke ika ha site na ịmalite akara aka ha - ma ọ bụ iji gosi onwe ha ma ọ bụ echiche ha - na ịchekwa ọdịnaya na akara ha na-enweghị ịdabere na ego mgbasa ozi sitere na ikpo okwu.
Emebere site na ngọngọ, ojiji nke smart contracts nwekwara ike inyere ndị na-emetụta ya aka ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ n'oge mgbe emechara mkpọsa ọ bụla. A na-etinye usoro nkwekọrịta dị mma na ọnọdụ akwadoro nke nwere ike ịtọ site na ụdị na ndị na-emetụta ya. Ozugbo nkwekọrịta ahụ ruru, enwere ike ibufe ego na-akpaghị aka na-enweghị eriri uhie nke ndị ọzọ na-akwụsị ọrụ ahụ.
Uru Drikwọ Withgbọ Na Ngosipụta
Ka ụwa na-agbanwe ngwa ahịa, otu ahụ ka ụlọ ọrụ na-ere ahịa si agbanwe agbanwe. Dị ejirila mmefu ego nke mgbasa ozi maka ụdị mgbasa ozi dijitalụ ndị ọzọ iji ruo ndị na-ege ntị ji nwayọ jiri ndụ ha gaa n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na ịre ahịa influencer nwere ike ịbụ omume nke oge a, ọtụtụ ụdị anaghị ahụkarị njikọ dị n'etiti ahịa na-emetụta influencer na nnabata ahịa, na-ahapụ ndị mgbasa ozi na-enwe obi abụọ banyere mmetụta nke ndị okike ọdịnaya a.
Nke a kachasị mkpa mgbe nsogbu nke 'aghụghọ ndị na-eso ụzọ' jupụtara na plethora nke usoro mgbasa ozi. Were onye nwere otutu narị puku ụmụazụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ntinye aka nke ọkwa ha dị obere, na-akụ obere mkpụrụ atọ. Ihe na - emekarị na ikpe dịka nke a bụ na ndị na - eme ihe ike zụtara ndị na - eso ụzọ ha. A sị ka e kwuwe, yana saịtị dịka Social Envy na DIYLikes.com, ihe niile ọ na - ewe abụghị naanị nọmba kaadị akwụmụgwọ iji zụta ihe usuu ndị bots na usoro mgbasa ozi ọ bụla. Site na ọtụtụ ngwa ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta iji dozie ihe ịga nke ọma naanị dabere na usoro dị ka ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ, ụdị 'aghụghọ' a nwere ike ghara ịchọpụtakarị ụdị. Nke a nwere ike ịhapụ ụdị mgbagwoju anya, na-ejighị n'aka ihe kpatara ihe dị ka mgbasa ozi na-ekwe nkwa na-eweta ọdịda.
Ọdịnihu nke ROI influencer nwere ike ịbụ nke a na-egbochi site na blockchain, na teknụzụ nwere ike ịnye nghọta ka ukwuu maka ụdị ndị na-achọ iji nyochaa ndị na-eme ihe ike ma gosipụta nloghachi ha na ntinye ego. N'otu ụzọ ahụ dị ka ndị na-eme ihe ngosi nke ọdịnaya ha, akara nwere ike ime ka azụmahịa ha na ndị okike ọdịnaya. Dịka ọmụmaatụ, ụdị nwere ike ịgba mbọ hụ na ọnụọgụ ọnụọgụ nke ndị na-emetụta ihe ọmụma, ozi banyere aha ha dabere na arụmọrụ gara aga, yana uru bara uru nke mmekọrịta ahụ agbachiri n'ime nkwekọrịta nkwekọrịta amamịghe tupu oge mkpọsa ahụ, maka mgbanwe mgbanwe na ntụkwasị obi na-ekwe nkwa karịa. ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi. Ọzọkwa, na iwepu ndị intermediaries na-enweghị isi, ngọngọ nwere ike nyere aka belata ọnụego ndị ọzọ a na-akwụ ụgwọ ndị ọzọ na ibelata ọnụ ahịa azụmaahịa na akụ na ụba ebe mmebi ego na-abawanye.
A Conduit N'etiti Uwa nke Fans na Creators
N'ime ụwa dijitalụ nke ihe ọmụma na-ezighị ezi na-achịkwa, ndị na-eme ihe ngwa ngwa enwetala ntọala siri ike ma a bịa n'ịbụ onye ikike nwere ike ịbụ ịkwalite akara ọkacha mmasị ha ma ọ bụ ikwu okwu n'okwu dị ha n'obi. Iru na mmetụta nke ndị na-eme ihe ike na ọha na eze enweghị ike ịkọwapụta, yana 41 percent nke ndị ahịa na-ekwupụta na ndị na-eme ihe ike kwesịrị iji nyiwe ha mee ihe ọma. N'aka nke ọzọ, pasent 55 nke ndị na-ere ahịa na-eche na ha ga-akpachara anya na-arụ ọrụ na ndị na-eme ihe ike bụ ndị na-ekwu okwu banyere nsogbu mmekọrịta ọha na eze. Esemokwu a dị n'etiti ụdị na ndị na - eme ihe ọ pụtara pụtara na ọ dị mkpa ka ndị na - eme ihe ike nwee nguzozi n'etiti nhazi onwe onye iji kpuchido aha njirimara na ịza obodo ha na ọha na eze.
Ma, gịnị ma ọ bụrụ na onye na - eme ihe ike kpebie ikwu okwu maka ihe kpatara ha kwenyere na iwu megidere iwu ahụ? Ma ọ bụ gịnị ma ọ bụrụ na onye na-akpali akpali chọrọ ka ya na onye na-eso ụzọ ya nwee mmekọrịta chiri anya ma nwee mmekọrịta chiri anya karị? Nke a bụ ebe netwọọk na-ezighi ezi nke blockcheni nwere ike ịbata iji jupụta ụwa nke ndị na-akwado ya na ndị okike, na-ewepụ onye etiti - nke nyiwe ma ọ bụ ụdị - yana mkpa maka ịkarị oke ọdịnaya. Na ngọngọ, ndị na-emepụta ọdịnaya ọ bụghị naanị na-enweta ikike nke akụ nke aka ha kamakwa ha na-enweta ohere ịbanye na obodo ha, na-eme ka ndị na-akwado ha nwee mmekọrịta dị ukwuu. Iji maa atụ, iji akara aka obodo ha nyere ndị na-eso ụzọ ha ikike ịkwụghachi ndị na-eso ụzọ ha ụgwọ na enweghị ike ịkwalite ha. N'otu aka ahụ, ndị na-akwado ofufe nwekwara ike ikwu ụdị ọdịnaya ha ga-achọ ịhụ, na-emekwa ka mmekọrịta dị omimi dị n'etiti onye okike na onye ofufe.
Enweghị ndị okike, nyiwe enweghị ike, ụdị nwere ike ịdị na ndò. N'ihe na-eme ka akụ na ụba na-adaba adaba maka ndị na-emepụta ọdịnaya na ụdị, ọ dị mkpa inwekwu ikike nke ike na igbochi ngọngọ nwere ike ijide isi ihe ga-eme ka ọ bụrụ na ị ga - enwe mmetụta dị egwu - nke ga - apụta ìhè, kwụ ọtọ, ma na - akwụghachi ụgwọ.
Tags: blockchaincreatorsFansinfluencerahịa ahịamonetizationmonetizationakaebeakaebeegosi